DF oo sharraxday sababta Puntland ay u heleyso lacagta ugu badan maamul-goboleedyada Muqdisho - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
DF oo sharraxday sababta Puntland ay u heleyso lacagta ugu badan maamul-goboleedyada Muqdisho
DF oo sharraxday sababta Puntland ay u heleyso lacagta ugu badan maamul-goboleedyada Muqdisho2017-07-17T12:58:19+00:00
Dowladda Soomaaliya ayaa sharraxaad ka bixisay muran ka dhashay lacagta loo qoondeeyey maamul goboleedyada Soomaaliya ee ku jirtay miisaaniyadda ay dowladda soo bandhigtay.
Muranka ayaa yimid, kadib markii la ogaaday in lacagta ugu badan ay helayaan Puntland iyo Jubaland, halka maamul goboleedyada qaar ay kusoo aaday lacag aad u yar.
Lacagtan ayaa u kala qoondeysan sidan:- Puntland $ 4,675,000 Jubbaland $ 2,695,000 Galmudug $ 1,425,000 Koofur Galbeed 1,425,000 Hirshabeelle 750,000 G/Banaadir $ 7,000,000
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duceyle Beyle ayaa shaaca ka qaaday in marka hore lacagta aysan ahayn mid ay dowladda siineyso maamul goboleedyada, balse ay tahay lacag ka imaneysa Bank Aduunka iyo hay’ado kale oo caalami ah.
Wuxuu sheegay in lacagta loogu talo-galay mashaariic laga fulinayo maamullada dalka, ayna u kala badan tahay sida mashaariicda u kala badan yihiin, una kala horreeyeen. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay ku xiran tahay sida mashaariicda loo kala ogolaaday, taasina aya tahay arrin dowladda aysan shaqo ku lahayn.
Waxa uu sheegay in maamulada cusub ee dhowaan la sameeyey sida Koonfur Galbeed, HirShabelle iyo Galmudug, ayagana ay markooda heli doonaan mashaariic, lagana yaabo inay ka bataan Puntland ama Jubaland.
Your Name Your Email Enter Your Message « Gabadhii ugu Quruxda badneyd Xildhibaanada oo Kursigeedii laga Ceyriyey …..
23 maalmood kadib qadka Internet-ka koonfurta Somalia oo dib loo helay Muqdisho »